Chikafu chembatatisi, isu tinokuudza maitiro ekudzora huremu nechikafu ichi | Kudya kweNutri
Chikafu chinotapira chembatatisi
Ichi chikafu chakagadzirwa kune avo vanofanirwa kugadzira chikafu kuti vadzike uremu nekuti ivo vakafuta uye vanofarira mafatata. Iwe unogona kuzviita kweinopfuura vhiki rimwe, zvinokutendera iwe kudzikisa huremu kutenderedza 1 kilos. Ikozvino, iwe unofanirwa kuve uine hutano mamiriro ehutano kuti uzviise mukuita.
Kana iwe wakatsunga kuita chirongwa ichi, uchafanirwa kunwa 2 litita emvura pazuva zvisinei nezvamunodya pakudya, switai infusions yako nechinotapira uye kurunga chikafu chako nemunyu uye hushoma hwemafuta ezuva. Unogona kubika matapiri muchoto kana kuvira.
2 Nei mbatatisi yakanaka pakurera uremu?
3 Mbatatisi zvivakwa
4 Mangani makirosi akarasika neinotapira kudya chikafu?
5 Yakatapira mbatatari yekudya menyu
6 Unogona here kutsiva mbatatisi yetapatata?
Kudya kwemangwanani: 1 infusion yesarudzo yako (kofi kana tii) uye girazi remuchero muto wemichero yesarudzo yako.
Pakati-mangwanani: 1 kumisikidzwa kwesarudzo yako (kofi kana tii) uye 2 bran mabhisikiti.
Kwekudya kwemasikati: 1 kapu yemwenje mutete, iyo huwandu hwaunoda hwembatatisi uye 1 michero yesarudzo yako.
Mid-masikati: 1 kumisikidzwa kwesarudzo yako (kofi kana tii) uye 2 akazara makeke ezviyo.
Snack: 1 infusion yesarudzo yako (kofi kana tii) uye 1 yakaderera-mafuta yogati.
Kudya kwemanheru: 1 mukombe wechiedza muto, iwo huwandu waunoda hwembatatisi uye 1 michero yesarudzo yako.
Pazasi iwe unowana menyu yechikafu chembatatisi kwevhiki rese.
Nei mbatatisi yakanaka pakurera uremu?
Chokwadi ndechokuti mbatatisi yakanakira kuonda uye pamusoro pezvose, kurasikirwa nedumbu. Imwe yenzvimbo dzinowanzo kutinetsa isu zvakanyanya uye izvo hazvisi nyore nguva dzose kudzika. Huye, iyo mbatatisi ichave mubatsiri mukuru sezvo iine yakakwira fiber index. Izvi zvinoita kuti tigutsikane nekutora zvishoma zvacho. Kugaya kunononoka, saka kunzwa kwekuguta, tichazviona nekufamba kwenguva.
Kune rimwe divi, ino sosi yakakwana ye antioxidants uye ine yakaderera glycemic index. Ichokwadi ndechekuti mbatatisi ine index iyi yakadzikira zvakanyanya kupfuura mbatatisi. Saka inogara iri shamwari yakanaka. Rini tinoda kudzikisa huremuTinoda mwero weshuga yeropa kuti uve wakadzikama, sezvo mbatatisi ichazotiitira izvi. Asi zvakare chikafu chakaderera-koriori ine huwandu hwemvura, izvo zvinoita kuti kugaya kuve nani.
Kutenda kune yayo yakakwira yezvinyorwa zve carotenes, ine antioxidant simba, zvinoita kuti isu ive imwe yezvakakosha zvekudya kwedu. Sekuziva kwedu, mbatatisi ine mapuroteni echisikirwo asingakundike. Asi zvakare zvakare kuti ine zvakare yakawanda muzana yefaera, panguva imwechete iyo iyo inoumbwa nayo zvicherwa senge calcium, magnesium, kana potasium, usingakanganwe vhitamini C. Pamagiramu zana etaputi, inosiya muviri inenge 100 ml yevhitamini iyi uye yevhitamini E. Asi zvakare inopa 30 mg ye potasium, 480 mg yesimbi, 0,9 magiramu efibha uye zvishoma zvinopfuura makumi mapfumbamwe emakori.
Hatigone kukanganwa, sezvo tataura mavitamini, ayo zvakare ane B1, B2, B5 neB6.
Mangani makirosi akarasika neinotapira kudya chikafu?
Chokwadi ndechekuti chikafu chipfupi. Iyo haifanirwe kuwedzeredzwa nenguva, nekuti sekuziva kwedu zvakanaka, iwe unogara uchifanira kudya nenzira yakaenzana. Izvo zvakakwana pakurasikirwa nehuremu panguva imwe chete nedumbu. Unogona uzviite kwemazuva mashanu kana matanhatu kunyanya. Chero bedzi hutano hwako hwakakwana. Panguva iyoyo unogona kurasikirwa maviri makirogiramu. Asi ichokwadi kuti muviri wega wega wakasiyana zvachose uye pachave nevanhu vanogona kuve nekuwedzera kuderera.
Yakatapira mbatatari yekudya menyu
Kudya kwemangwanani: Girazi remuto unotapira uye maorenji maviri
Pakati-mangwanani: 30 magiramu echingwa chegorosi chakazara neiyo skimmed yogati
Kwekudya kwemasikati: Yakabikwa mbatatisi (iyo yaunoda) nembiya yetisi uye madomasi
Pakati masikati: Kukanganiswa uye maviri akazara makeke macookie
Kudya kwemanheru: Yakabikwa mbatatisi neyakareruka miriwo kirimu uye chibereko che dessert.
Kudya kwemangwanani: Girazi remuto unotapira, zai rakaomeswa uye muchero
Pakati-mangwanani: magiramu makumi matatu echingwa chegorosi chakazara ne30 magiramu echiedza chizi
Kudya: Mbatatisi puree yakasanganiswa nepuniki yemukaka wakasviba uye magiramu zana eakakangwa zamu rehuku nemiriwo
Pakati masikati. Kukanganiswa uye magiramu makumi matatu ezviyo zvizere neiyo skimed yoghurt
Kudya kwemanheru: Yakabikwa mbatatisi nesadhi uye muchero
Kudya kwemangwanani: Kofi yoga kana nemukaka wakaomeswa, magiramu makumi matatu echingwa chegorosi chakazara uye zvidimbu zvitatu zvediki kana zamu rehuku
Pakati-mangwanani: 50 magiramu echiedza chizi uye zvidimbu zviviri zvemichero
Kudya: Baked kana microwaved mbatatisi machipisi ane 125 gramu ehove uye ndiro yesaradi.
Pakati pemasikati: Muto wezamu wakanaka uye yogati yakasviba
Kudya kwemanheru: Mbatatisi puree ine ndiro yemuto muto uye chibereko che dessert.
Kudya kwemangwanani: Kutapira mbatatisi kana muto une zvidimbu zvishanu zveteki kana huku uye chimedu chemuchero
Pakati-mangwanani: 30 magiramu ezviyo zvakakwana nemukaka wakaomeswa
Kwekudya kwemasikati: Baked sweet potato and salad
Pakati masikati: 30 magiramu echingwa chegorosi chakazara ne 0% chizi
Kudya kwemanheru: Mbatatisi yakachena, 150 magiramu ehove uye yogati yakasikwa.
Kudya kwemangwanani: Kusanganisa uye maviri makeke ekeke
Pakati-mangwanani: zvidimbu zviviri zvemichero
Kudya: Mbatatisi yakabikwa ine mazai maviri akabikwa uye muchero mumwe
Pakati masikati: 30 magiramu echingwa chegorosi chakazara ne turkey
Kudya kwemanheru: saradhi, mbatatisi yakachena uye yogati yakasikwa
Unogona here kutsiva mbatatisi yetapatata?
Kunyangwe iwo mubvunzo uri iwo weakajairika, chokwadi ndechekuti mhinduro iri nyore kupfuura zvatinofunga. Sezvo mbambaira uye mbambaira zvakafanana. Ndokunge, mazita maviri eiyo yakafanana tuber. Asi ichokwadi kuti munzvimbo yega yega inogona kuzivikanwa nemumwe wavo, izvo zvinowanzo kutungamira mukukanganiswa. Zvinofanira kutaurwa kuti mbambaira kana kuti mbatatisi inozivikanwa zvakare nezita rekuti mbambaira kana kuti mbatatisi.
Ichokwadi ndechekuti kunyangwe zvichingove zvakafanana chikafu, tinoita mutsauko usingaite mazviri. Sezvo iine mhando dzakasiyana uye izvi zvaita mazita ekuti itaridzewo zvakasiyana. Imwe yemisiyano iyi ichave iri muvara pulp zvese neganda. Sezvo mhando dzine ganda rakatsvuka ndidzo dzatinoti mbatatisi, nepo dziya rine ganda rakareruka richinzi matapiri. Nekudaro, patinenge tichida kutaura nezve mbatatisi kana mbatatisi muchikafu chedu, tinofanirwa kuziva kuti tichave tichinyorova hunhu hwakafanana, hunhu uye mabhenefiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Chikafu chinotapira chembatatisi
kana ndichizonwa muto unoremerwa, 4 mbiriso nemikombe miviri yekofi pazuva, zvirokwazvo ndichafa nenzara uye ndosaka ndisingakwanise kudya zvekudya kuti ndideredze huremu
Zvinoita kuti ndisekwe madhayeti aya aunoisa kuti uderedze huremu hwaunonyengedza vanhu. Iwe hauise chero protein uye iyo hydrate yaunoisa iwe unoisa mumanheru ndipo paunowana mafuta ... tisingataure mashoma mashoma maumbirwo aunodya ... chinhu chete chauchazowana nacho kudya uku ndekwe kurasikirwa nemvura ne infusions, kurasikirwa nemhasuru neproteini diki uye nekuisa mafuta nekuisa iyo hydrate mukudya kwemanheru pawaifanirwa kunge uri pakudya kwemangwanani kuti uve nesimba rezuva racho. Anototaura kuti munhu wese inyanzvi uye nekuda kweizvi vanoparadza muviri wedu nehutano
Inna salazar akadaro
Zvakanaka. … Handifunge kuti ndichakwanisa kusadya nyama kwevhiki rose asi muimbi akaita chikafu ichi uye zvakafamba zvakanaka.
Pindura kuna Inna Salazar
Fabio Calderón akadaro
Ichokwadi kupi kuti mapuroteni ari mune chikafu ichi? Ichokwadi kuti mbatatisi ine hutano zvakanyanya asi iwe unofanirwa kuisanganisa nemapuroteni, kuti kushushikana kusakupa kupenga wobva woda kudya nzou yakazara ... Kwete chikafu iyo isiri protein-based haina basa ... Zvese kuwedzera mhasuru uye kudzikisa mafuta emuviri
Pindura kuna Fabio Calderon
Pfungwa dzekudya kwekureruka kunakirwa muzhizha rino